नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्ने विश्वकप र एसियन कप छनोटका लागि !!!! « गोर्खाली खबर डटकम
नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्ने विश्वकप र एसियन कप छनोटका लागि !!!!
किम्बुको अङ्ग्रेजी नाम व्हाइट मलबेरी हो । यसले ट्युमर , मधुमेह जस्ता रोगहरुलाई निको पार्नुको साथै विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धि फाईदाहरु पुर्याउँदछ । धेरै बिरुवाहरु रोगलाई निको पार्ने गुण भएपनि औषधिको रुपमा चिनिदैंन । किनकी यसको प्रयोग धेरैजसो अरु औद्योगिक उद्येश्यको लागि मात्र गरिन्छ । यस्तै किसीमको प्रयोग किम्बुको रुखको पनि हुन्छ । किम्बुको रुखको प्रयोग काठ र रेशमको किरालाई खुवाउने फलको रुपमा गरिन्छ । तर किम्बु स्वास्थ्यको लागि धेरै फाईदाजनक छ । साथै यसले विभिन्न
रोगहरुबाट छुट्कारा दिलाउँछ । जस्तै : मधुमेह, हृदयसम्बन्धि रोगहरु र ट्युमर आदि ।
त्यसैगरी यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुन्छ । त्यसैले यसलाई कोलेस्ट्रोललाई कम गर्न र हृदयसम्बन्धि रोगहरु हटाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।अमेरिकाको टेक्सास विश्वविद्यालयमा गरिएको अध्ययनबाट किम्बुमा प्राकृतिक फेनोल रेजभेरेट्रोल पाईने कुरा पत्ता लगाएको छ । जस्ले क्यान्सर , हृदयसम्बन्धि रोगसँग लड्न मद्धत गर्दछ ।
“खुसीको खबर” ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर पुलिस भर्ती हुन चाहनेहरुका लागि राम्रो आवसर !!!